Harinjaka Ratozamanana (Tantara2): Mendrika azy ve ny toerana maha DG ny ministeran’ny indostria ho fampandrosoana ny sehatra tsy miankina? | Pakysse
septembre 20, 2017 in Non classé
Sary nalaina tao @ facebook ny FONDATION RATOZAMANANA
Ho fanombohana ity lahatsoratra ity, dia miala tsiny aminareo mpamaky raha izao indray vao maneho hevitra roa taona aty aoriana. Hialako tsiny mialoha ihany koa, raha mety hanafitohana sy hanelingelina ny masonareo ireo soratra diso.
Aleo halan’andriana toy izay halam-bahoaka.
Mety misy ireo mihevitra fa ory hava-manana, matoa henjehina mafy ny olona iray. Ao ihany koa ireo mahita fa fanaony Alika ny mivoavoa rehefa noana na mangetaheta! Saingy, adinon’ireo milaza izany fa tsy ny hanohanana ihany no mampivoavoa ny alika. Tafiditra ao anatin’izay ihany koa ny fanairana fa misy olona tonga tsy nantsoina hangalatra na handromba na hamono olona sns. Izany hoe, fanairana ny tompontrano na ny tompon’andraikitra fa misy mitady hanao ratsy. Misaotra ny alika mpanaitra izany isika @ izay lafiny izay!
Tsetsatsetsa tsy aritra sy kilalaon-teny, ho fanazavana ny fomba fisainana misy eo @ tsika Olombelona ihany iny. Fa aleo hiverenana vetivety ny mikasika ny fomba fahitako ity olom-panjakana, misahana toerana ambony eto @ firenena ity. Tsy iza izany fa ingahy Ratozamanana.
Raha ny zava-misy mikasika ity lojika, entiny antoko politika HVM ity dia tena mahatalanjona ahy tanteraka ary mahatonga ny fanontaniana hipetraka manao hoe: « Lany olombanona sy olomanga tokoa ve i Madagasikara? ». Raha izay tokoa mantsy ny tranga misy dia aleo « halan’andriana toy izay halam-bahoaka. »
Ny fifandraisako sy ny nahafantarako an’ingahy DG
Folo taona katroka (2007 – 2017) ankehitriny no nahafantarako an’ingahy rainy. Olona « sac à dos » avy any Frantsa nigadona teto Madagasikara no hitako voalohany. Fifankalalana nanomboka t@ internet ary niafara t@ fifankahitana @ samy Olombelona.
Raha ny marina dia ny tontolon’ny blogging (internet) no nampihaona anay. Nandeha ny ady hevitra @ tokony ampiroboroboana, ny fahafahana miteny sy maneho hevitra eto @ tontolon’ny numérique (internet) aty Madagasikara. Mianadahy maromaro izahay no nifaneraresera t@ izany ary samy nipetraka t@ kaontinanta hafa (Amerika, Eropa ary Afrika.)
Natsangana ny fikambanana FOKO MADAGASCAR taminio taona io teto Madagasikara sy tany Canada. Natao ny « networking » ary ny tenako no tompon’andraikitra voalohany ny fikambanana teto Madagasikara. Samy nitondra ny anjara brikiny, t@ fitadiavana ny soa sy ny tsara ho an’ireo mpiarabelona izahay efatra mianadahy Joan, Lova, Mialy ary ny tenako (Miala tsiny aminareo raha manonona ilay anarana)
Nandeha ny andro, nandeha ny fotoana, niasa mafy ny tenako sy ireo olona voalaza anarana etsy ambony. Faritra 11 eto Madagasikara no misy ny rantsan’i fikambanana ary manana mpikambana, nomena fiofanana, maimaim-poana t@ resaka blogging sy ny « reseaus sociaux » maheriny 500 ny FOKO MADAGASIKARA ankehitriny (mpianatra, ONG, olona tsotra, miaramila, mpitsara, mpisolo vava, mpiasany banky, mpanakarena miasa tena, mpanao gazety tradisionaly, olona nisotro ronono, mpanao fanatanjahan-tena avo lenta, mpampianatra eny @ anjery manontolo sns.)
Tonga t@ nofinofin’ingahy Ratozamanana fa ilay « potentiel » nisy teo aminay efatra mianadahy dia azo araraotina mora foana. Nofy ririnina t@ andro fahavaratra nefa no nitranga ary tsy tao anatiny fanantenany.
FOKO MADAGASCAR sy Harinjaka Ratozamanana
Mpikambana tao @ FOKO Madagasikara ve izy? TSIA NY VALINY. Nanasoa sy nizara zavatra tsara ho an’ireo mpikambana ve izy? MBOLA TSIA IHANY NY VALINY. Nampiasa ny anarany fikambanana ve izy nanamboarana CV hizestiavana sy nangalana voyage tetsy sy taroa? ENY NY VALINY sns.
Hatreto izany raha mbola minia ilay bandy io fa nahavita zavatra sy nampiroboro ny fikambanana voalohany, misahana ny atao hoe: » JOURNALISME CIOTYEN » teto Madagasikara dia diso tanteraka izany. Esory ao an-tsaina fa tsy nahavita na inona na inona ho anio fikambanana io Harinjaka Ratozamanana na ny bitika aza! Ary azo porofoina t@ asa natao sy entina eo @ lafiny ara « juridique » ity resaka ity raha tadiaviny sy halefa alavitra kokoa.
Inona ny olana teo aminay?
Tonga niaraka t@ « sac à dos » hoy aho ingahy rainy ny taona 2007, niresaka tamiko, ary nifanerasera tamiko nandritra ny fotoana fohy. Nihevitra fa rehefa gasin’andafy be resaka dia afaka mamitaka ny gasy tsy be resaka eto an-toerana!
Niteraka ny fifanolanana ara-kevitra nohon’ny lainga sy ny fitaka hitako sy niainako niaraka t@ ledala. Nifandona mafy ara fotokevitra satria, nisoratena ho toy ny mpanjaka ingahy « sac à dos » ka tokony nomena vola, fahefana sy ny mifandraika @ izany. Nohon’ny fahaizana mamitaka anaty lainga tsara lahatra nefa, dia tsy nekeko izay zavatra izay!
Mendrika ny atao DG ny ministeran’ny indostria misahana ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ve ialahy ry Harinjaka Ratozamanana?
Tonga dia TSIA ny VALINY! Mahamenatra tanteraka raha ialahy no mitazona sehatra ambony tahaka izao. Tsy resaka fialonana na ny mifandraika @ izay fa ilay fomba amam-panao dia feno fitaka ary tsy mampitsiriritra velively.
Eto dia mbola nahatalanjona ahy ny fanatrehan’ialahy sy ny fandraisan’ialahy anjaram-pitenenana @ ady hevitra mikasika ny nokleary? Eto ihany koa dia mbola gaga sy talanjona ny tenako fa hay ve ialahy ka mpandraharaha e? Eto ihany koa dia variana aho fa rehefa avy nanao mpanolotsina tao @ ministeran’ny paositra dia lasa mivadika any ministeran’ny indostria ialahy? (Politiquement correcte mais honnêteté intellectuelle oblige des explications Mr le DG). Eto koa dia mbola variana sy mametraka fanontaniana ny tenako hoe iza marina moa izany ialahy ry Harinjaka? Ohatrinona moa izany ny capital misy eo @ ialahy ao aminio fondation ao @ Facebook io? Eto koa dia Gaga sy talanjona foana aho @ ialahy manao zavatra sans scrupule io? Eto koa dia tahakan’ny mijery sarimihetsika aho rehefa manaratsy sy manely tsaho etsy sy aroa ialahy momba ny tenako?
Raha ireo ankizy marobe, mpikambana, ao @ Foko Blog Club, nahazo fanasana, hanatrika atelier sy conférence, tato anatiny sy ivelany Madagasikara ihany koa ve izany, dia mendrika azy ireo ny ho atao DG any Air mad na JIRAMA sns. – Tsy mila mandalo sedra hafa fa tonga dia resaka tandrametraka sy fitaka seho ivelany sns.
Tsetsatsetsa tsy aritra hafa ihany koa ramose fa rehefa vita ny atelier sy ny « conférence » dia mila manao tatitra lava dia lava ny mpandeha ho an’ireo mpanaraka fa tsy « paragraphe » iray ao @ Facebook akory ny tokony hamintinana ny telo na efatr’andro nanatrehana ilay izy. Izay no ilaina ny blog ho antsika tia mampiroborobo ity tontonlon’ny internet ity!
Raha tsiahivina vetivety dia nampiakarinay ialahy ary nomenay ny fahafahana hiatrika ny TED (Firy @ nareo mpamaky izao no mahalala izay?) ary fantatra’ialahy tsara iza ilay olona tokony nandeha tany? Nohon’ny fitadiavan’ialahy voninahitra, t@ alalan’ny tetik’asa, fampiakaran’ialahy ny tena-keliny’ialahy dia mihevitra ny olona maro, fa tena dadany ialahy. Adala izay mora sodokan’ny Akanga tsara soratra!
Rehefa nomenay ny fahafahana hanatrika ny BARCAMP 2è édition t@ taona 2008 ny vatana sy ny sain’ialahy ry Harinajaka. Satria, noheverinay fa efa tonga saina ary tokony nampiova ny fomba amam-panaon’ialahy ny sedra ratsy sy ny maizina nolalovan’ialahy (Fitoriana nataon’olon sns.). Dia akory ny hagaganay fa ialahy foana no mitsetsitra ilay fandehanana mivoaka any ivelany mampiseo fa manana QI ambony nohon’ny hafa? (Fitiavan-tena ve sa izay mihintsy ilay izy?)
Eto dia deraiko tanteraka ihany koa ireo bandy sy sipa tena manampahaizana ao @ fikambanana HABAKA sy ireo startupers nampiakatra an’ialahy ho tonga aminio toerana tsy mendrika any ialahy io.
Nandray vonona t@ zavatra maro ialahy ary omena tehaka sy salio fito manokana kosa aloha fa dia ain’ialahy tsara ny nanao ny « exploitation » olona maro, natao tohatra fiakarana hahatogavana @ tanjona tsy dia misy dikany firy loatra ho ahy.
Futur Bill Gates de l’Afrique sa futur mpandraharaha zaton’i Afrika?
Eto dia tena mahatalanjona sy mahagaga ahy ihany koa ilay lahatsoratra nivoaka momba an’ingahy rainy nataony vazà momba ny tenany taminio.
Rehefa miaraka mandany andro sy misotro kafe miaraka @ mpanakarena ve dia lasa mpanakarena? Rehefa miresaka sy namana mpandraharaha ve dia lasa mpandraharaha?Rehefa manao selfie miaraka @ olona malaza ve dia lasa malaza tampoka ihany koa? Rehefa manao selfie miaraka @ mpanakarena ve dia lasa mpanakarena ihany koa? Rehefa manatrika hatrik’asa miaraka @ olona manam-pahaizana ve dia lasa manam-pahaizana ho azy ihany koa? Rehefa mandainga sy mamorona « identité » ve dia lasa olombaovao tampoka ihany koa? Sns, sns.
Tsy izay angamba ny lalàna mifehy ny fandraharahana sy ny toerana hahatongavana ho lasa olombanona. Tsy mila manao déclaration d’impôt any @ fandoavan-ketrany grande entreprise (ar 4 miliara +), tsy mila mampiseo fa manana « chiffre d’affaires millions de dollar » sy niasa mafy nahazoana anio chiffre d’affaires io, tsy mila manana mpiasa maro, tsy mila manana capital mavesatra, tsy mila teknisianina sy manana connaissance « approfondie » @ sehatra iray dia afaka atao hoe futur Bill Gates de l’Afrique na misoratena indray mandeha ny ho lasa leader any Afrika rahampitso.
Hafatra ho any Harinjaka Ratozamanana
Lasa DG tampoka ialahy @ ireto karazana « identité » maro karazana. Milalao politika ialahy ary mihevitra fa ireo bandy sy sipa manam-pahaizana, nandrato fianarana ela mikasika ny fitantanana ny raharaham-panjakana ho an’ny sehatra tsy miankina dia Omby mijery flora avokoa.
Ministera aloha izay vao sehatra tsy miankina! Arak’izany, ny fahitako azy, asesika daholo izay te hisesika fa tsy manana olona ny HVM.
Any hafatro ramose Ratozamanana, misy ny bandy sy sipa tahaka ny tenako eto @ ity firenena ity. Tsy misoloky, tsy tia mangalatra, tia mitsinjo ny fiarahamonina, tsy tia manararaotra ny hafa, masahy mandray andraikitra, tsy mila volam-panjakana vao afaka mivoaka any ivelany, tia miasa mafy sy miasa mahitsy ary tsy mpandainga nefa, masahy maty @ rariny sy ny hitsiny.
Arak’izany, misaotra an’ialahy nanaitra ilay ambopoa @ fiverenana miblog. Misaotra any ialahy ihany Koa arak’izany fa rehefa ho avy ilay fotoana dia mety ho tonga any amin’ialahy aho handodona, hangataka fanampipanazavana @ resaka fampiroboroboana ny indostria ho an’ny sehatra tsy miankina.
Asa soratra faharoa ho an’ingahy tale ity. Ny voalohany dia t@ teny anglisy! Mbola ho avy ny manaraka raha ilaina, miaraka @ porofo mafonja fa tsy mahantra olombanona akory i Madagasikara.
Mila mitandrina ny tanora @ seho ivelany ary mila mampiseo fa mbola betsaka ny tena izy nohon’ny mifanohitra @ izay!
Ho an’i Madagasikara sy ny malagasy
« DIASPORA MALAGASY: Aza omena any Onitiana Realy sy Beatrice Atallah ny volanareo!
Maninona i Marc Ravalomanana no tokony ho fidiana fa tsy ny hafa ? »